”Heshiiskii Juve & Berardi weli wuu taagan yahay” – Maareeyaha Sassuolo – Gool FM
”Heshiiskii Juve & Berardi weli wuu taagan yahay” – Maareeyaha Sassuolo
(Sassuolo) 18 Nof 2016 – Maareeyaha kooxda Sassuolo ee Giovanni Carnevali ayaa ka dhawaajiyay in sida uu yiri “uu weli shaqaynayo heshiiskii iyaga iyi Juventus” ee ku aadanaa Domenico Berardi, jeer uu jaha wareer badani ka taagnaa kooxda uu laacibkani ku biirayo.
Xagaagii labada naadi iyo laacibka ayaa isku afgartay inaysan Juve ka shaqaysiinin heshiis ku kacayay €25m oo uu laacibku kula biiri lahaa Juve.
Inter oo uu laacibkani taageeri jirey, Milan iyo naadiyo dhowr ah oo kale ayaa deeto soo galay qalboobtanka loogu jiro helista adeegga laacibkan soo baxaya ee Berardi, balse xaaladdu weli kalama cadda.
“Berardi ma diidin Juventus,” ayuu Carnevali u sheegay Rai Sport.
“Waa laacib ka tirsan Sassuolo, balse heshiiskeennii Juventus weli wuu jiraa, dhamaadka kal-ciyaareedkan baana arkaynaa waxa dhaca.” ayuu raaciyay.